Inona no manintona ary nahoana no zava-dehibe amin'ny fiainan'ny alika | Tontolo alika
Indraindray maro ny olona no mihevitra fa ny famaritana ny fanontana sy ny fiaraha-miasa dia mitovy ihany tsy mitovy mihitsy ireo hevitra roa ireo ary na dia misy ifandraisany aza ireo teny roa ireo dia misy fahasamihafana maromaro.
1 Inona no fanontana?
2.2 Fiaraha-miasa amin'ny karazana biby hafa
2.3 Fiaraha-monina amin'ny olona
3 Zava-dehibe ny fanoratana eo amin'ny fiainan'ny alika kely
Inona no fanontana?
Ny fanaovana pirinty dia ny habetsahan'ny traikefa izay misy amin'ny alika hatramin'ny fotoana nahaterahany, izany hoe izay rehetra nianarany ary milaza amin'ny zanak'alika kely azy fa alika izy ary iza ireo ao amin'ny manodidina azy, toa ny reniny, ireo rahalahiny, alika hafa ary olona hafa.
Ny fametrahana ny biby fiompintsika dia mety tsy ho sarotra, fa ny mifanohitra amin'izay dia zavatra mora tanteraka no tokony hitranga ao anatin'ny tontolo salama sy voajanahary.
Mba hahatakarana azy amin'ny fomba tsotra, ny fanontana dia mifototra amin'ny fifandraisanay amin'ny biby kely samy miaraka amin'ny reniny, toy ny amin'ireo rahalahiny ary koa amin'ny olona hatramin'ny fotoana voalohany nahaterahany, na dia fotoana fohy aza.
Ny fanentanana ny biby fiompintsika amin'ny fahazazany dia tena zava-dehibe amin'ny fampandrosoana a fanontam-pirinty mahafinaritra sy mahomby, izay hanampy anao ary ho lasa fototry ny fahafahanao mifanerasera amin'ny fomba mety ary avy eo manompo handrisika anao.
Ny fotoana mety indrindra tokony hahitan'ny biby fiompintsika ireo traikefa rehetra amin'ny fanoratana, manomboka amin'ny herinandro faharoa na fahatelo hatramin'ny herinandro 10 na 12.
Rehefa lasa io vanim-potoana io, izany hoe, aorian'ny 15 na 16 herinandro dia tsy mora tohina isan-karazany intsony ny alikantsika kely, noho izany, dia ho sarotra kokoa noho io aorian'io. mamaly ny fanitsiana mety ny fihetsika tsy mendrika.
Ny tanjon'ny fiarahamonina dia ny fahafantaran'ny alikanay alika ny toerana misy azy ao anatin'ny tontolo tena izy, izay hanalavirany ny reniny sy ny rahalahiny.
Ny dingana manapa-kevitra ho an'ny alika mba hahazo izany traikefa rehetra izany izay hiaraka aminy mandritra ny androm-piainany, manomboka amin'ny valo herinandro, izany hoe roa volana eo ho eo ary hatramin'ny 16 na 18 herinandro eo anelanelan'ny efatra ka hatramin'ny efatra sy sasany herinandro.
Inona no rakotra azy karazana fiarahamonina telo samihafa izay: fiaraha-miasa amin'ny alika hafa, fiaraha-miasa amin'ny karazana biby hafa ary fiaraha-miasa amin'ny olona.
Raha ny alikantsika dia efa niaina fanoratana, midika izany Efa mazava ny karazana biby.
Na izany aza, tsy midika izany fa ny alikantsika dia efa mahalala ny fomba fitondran-tena amin'ny alika hafa ary kely kokoa dia midika izany fa fantany ny toerana sahaza azy rehefa miaraka amin'ny alika hafa izy, satria tena zava-dehibe ny ahatongavan'ilay alika a fiaraha-miaina tsara miaraka amin'ny karazany mitovy.
Ny hevitra tena tsara dia ny fitsidihana zaridaina manokana na toerana ahafahanao mifanerasera amin'ireo alika mitovy taona aminao, na tanora na olon-dehibe angamba. Ity karazana fivoriana ity dia tokony hatao eo ambany fanaraha-mason'ny tompony ny biby fiompy, izany mba hahazoana antoka fa tsy misy fahasamihafana lehibe amin'ny habeny, satria raha telo volana monja ny alikanay ary milanja 7 kilao dia mety handratra ny tenany izy rehefa milalao na mihazakazaka miaraka amin'ny alika antitra izay mety hahatratra 50 kilao ny lanjany.
Ireo no fotoana mety indrindra rehefa mila ampianarina ny biby fiompintsika maharitra tsy miovaova ary tsy mampiasa karazana herisetra.
Tena ilaina io fe-potoana io, noho izany ilaina ny manakana ny alikantsika tsy hiaina toe-javatra mampivadi-po, izay mety hiteraka tahotra sarotra ianao avy eo, sao tsy ho voavahao rehefa tonga olon-dehibe ianao.
Toy izany koa, ary raha mahavita mifanerasera amin'ny fomba mety ilay alika kely, dia hanakana azy tsy hanana fitondran-tena mahery setra amin'ny alika hafa izany avy eo.
Fiaraha-miasa amin'ny karazana biby hafa
Mitovy amin'ny manandrana mampifandray ilay alika kely amin'ny alika hafa izahayTsy maintsy manao toy izany koa isika amin'ireo karazana biby hafa, izay tsy asa mora izany raha eny amin'ny habakabaka an-tanàn-dehibe isika.
Noho izany, azontsika atao ny manandrana ny saka havana na namana iray, angamba mandeha an-tongotra amin'ny toeram-piompiana, na inona na inona fotoana mety hahatongavan'ilay namantsika kely hahalala izany ao anatin'ny tontolony dia tsy misy alika kely hafa toa azy ihany ary ny olona, ​​misy karazany koa ny biby.
Ny karazana alika sasany dia manana fitondran-tena mpiremby be mpahalala ary indrindra amin'ireo tranga ireo izay mila manandrana kely kokoa isika ary ambonin'izany rehetra izany dia manana faharetana be. Zava-dehibe ny hitadidiantsika fa ny hevitra dia tsy ny hitondrantsika ny alika any amin'ny zoo, ihany Ny fampisehoana azy dia misy karazana zavamananaina hafa toa azy koa.
Fiaraha-monina amin'ny olona
Malaza noho ny hoe mipetraka ao an-tranontsika ilay alika, na izany na tsy izany ary amin'ny ankamaroan'ny tranga, voafetra ny tontolonaoMiankina amin'ny isan'ny olona mipetraka na mitsidika ny trano mazava ho azy, olona vitsy dia vitsy.
Rehefa mandamina fivoriana canine iray hafa ao amin'ny valan-javaboary isika, mety izao no fotoana mety indrindra hahitan'ny alikantsika fa misy olona hafa koa eo amin'ny tontolo iainana. Ity dia hevitra tonga lafatra, izay azo antoka fa hisaorantsika any aoriana na dia somary mahamenatra aza amin'ny voalohany, resaka fitsangatsangana fotsiny ilay izy.
Tsy ilaina ny hitondrantsika azy hitsidika ny valan-javaboary foana mba hahafahany mihazakazaka, rehefa alika miaina amin'ny tontolo an-tanàn-dehibe dia tsy maintsy fantany tsara ny fomba fitondran-tena amin'ny sisin-dàlana iray metatra ny halavany. Toy izany koa, ilaina ny mandranitra ny toe-javatra izay isehoan'ny tompony fisehoan-kery, izany hoe ny toerana misy antsika ao anatin'ny ambaratongam-pahefana. ny tompony no mandray ny fanapaha-kevitra ary izy no miteny rehefa tonga ny fotoana hilalaovana, rehefa tonga ny fotoana fisakafoanana, rehefa tonga ny fotoana fialan-tsasatra ary rehefa misy olana mihoatra ny alika.
Na izany aza, ny fahefana toy izany dia tsy maintsy ampiharina amin'ny fomba ara-drarinyFa tsy misy biby hafa eto ambonin'ny tany izay mahalala tsara kokoa ny fahamarinana noho ny alika.
Ny sazy henjana loatra dia mety hisy fiantraikany amin'ny biby fiompintsika amin'ny fomba maro ary bebe kokoa rehefa voalaza fa tsy mendrika izany sazy izany, toy ny mody rehefa avy andro iray any am-piasana ary mandoa azy amin'ny alika kely, dia mahalasa saina tanteraka ilay alika kely. Raha manao izany isika dia ho mahery setra fotsiny tsy misy antony ary izahay koa dia hanary izay rehetra efa vitantsika, satria tsy hahatakatra ny anton'ilay toe-javatra ilay kely.
Zava-dehibe ny fanoratana eo amin'ny fiainan'ny alika kely
Rehefa mandalo ireo traikefa rehetra ireo ny alikantsika, dia hahafahany mivoatra amin'ny filaminana bebe kokoa izy io, feno fahatokisan-tena ary avy eo tsy misy karazana tsy fahatokisana mety hiteraka tahotra azy na amin'ny tranga ratsy indrindra, hampiasa fitondran-tena mahery setra.
Amin'ity faritra ity no tena ahalalantsika ny maha-zava-dehibe ny ahafahan'ny alika kely hijanona miaraka amin'ny reniny sy ny iray tam-po aminy farafaharatsiny fito na valo herinandro voalohany, izany hoe 45 andro farafaharatsiny. Raha ny alika kely dia efa nanana fotoana nifaneraserana tamin'ny hafa amin'ny karazany, karazana biby na olona hafa nandritra ireo herinandro ireo, dia midika izany fa manana mety be ny ho lasa alika marin-toerana ary miaraka amin'izay koa faly, izay tadiavintsika tompony.
Etsy ankilany ary rehefa misy ny tranga izay ifandraisan'ny alikantsika amin'ny olon-kafa mandritra ny fanoratana, ho fanampin'ireo izay efa tafiditra ao anatin'ny vondrona ao an-trano dia tena hahasoa tokoa izany satria io dia hanampy ny alikantsika hitraka ny toetra mahafinaritra, be fitiavana ary mahafinaritra raha tokony ho be tezitra sy asocial.
Izany no antony maha-zava-dehibe ny fanoratana ny ain'ny biby, nanomboka ity dia hanamarika ny toetranao sy ny toetranao, izany no adidintsika ny miantoka ny fanatanterahana ny fanoratana amin'ny fomba mety.
Puppy izay manana dian-tsoratra tsara dia mazàna hanao toy izao:
Handeha hanatona antsika: Rehefa alika kely dia tsara ny sary dia hitady antsika hilalao azy io, Tsy hanahirana azy izy raha mikasika azy isika mandritra ny fisakafoany na rehefa misotro rano izy ary ankoatr'izay dia hiezaka ny hisarika ny sain'ny alika hafa izy mba hahafahan'izy ireo milalao ihany koa.
Hizaha antsika: Rehefa avy manantona anay dia hanitra ho antsika ny hanitrika ny fofonay.
Tsy hiafina ao ambadiky ny reniny izy: Alika kely, na inona na inona habeny, rehefa miafina ao ambadiky ny reniny dia mampiseho mazava a tsy fahatokisana avo lenta, tahotra ary fisintahana be dia be, midika izany fa tsy ampy ny fanontaniany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Inona no manintona ary nahoana no zava-dehibe amin'ny fiainan'ny alika
Ahoana ny fandroana alika voalohany
Ahoana ny fanatsarana ny diany amin'ny alika